sharciga Cusub ee ka bilaabanaya Sweden Bisha July iyo Saameynta uu ku leeyahay Qaxootiga Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka Maanta Somaliskasharciga Cusub ee ka bilaabanaya Sweden Bisha July iyo Saameynta uu ku leeyahay Qaxootiga
sharciga Cusub ee ka bilaabanaya Sweden Bisha July iyo Saameynta uu ku leeyahay Qaxootiga
April 30, 2021 Wararka Maanta Somaliska, Wararka Sweden 0
Maanta Barlamanka Sweden ayaa loo gudbiya sharciga Cusub ee Dowlada qorsheeneyso kaasi oo dhaqan galaya bisha July.
Sharciga Cusub ayaa leh saameyn xoogan waxana lagu badalayaa midka hada jira iyadoo sharcigan uu dhibaato ku yahay qaxooti badan oo wadanka iska dhiibaya iyo kuwa hada ku sugan ee jawaabta sugaya.
Maxaa ku jira Sharciga Cusub
Sanadkii 2015 Sweden waxaa ka bilowday sharci kaasi oo dadka helay sharciga siinaya deganaansho ku meel gaar ah tusaale 3 sano ama 1 sano qofba sida uu markaasi nasiibkiisa noqdo lakin dadka badan kooda ayaa helay 3 sano lakin Sharcigaasi kumeel gaarka ayaa ah mid mudo kooban soconaya oo looga baxayo xaalada.
Dowlada ayaa hada wada qorshe lagu badalayo sharcigaasi lagu meel gaaray tan iyo sanadkii 2015 lakin dhibka jira ayaa ah in Sharciga sida rasmiga loo isticmaalayo uu ku jiro Qodobadan.
1 in Qofka Sharciga hela la siiyo mid ku meel gaar ah oo 3 sano ah.
2 in qofka 3 sano gudaheeda uu helo karo midka rasmiga hadii uu nolol ahaan isku filnaado ama luuqada barto sidoo kale bulshada uu dhex-galo.
3 Qofka wadanka ku sugan ee diidmada la siiyo in uu wadanka sii joogi karo xaalad bini’aadantinimo.
4 iyo Caruurta aanan lala socon ee diidmada hela loo ogolaado joogitaanka wadanka sidoo kale.
Qodobo badan ayaa ku jira sharcigan sida rasmiga dowlada u isticmaaleyso isla markana bilaabanaya sanadkan gudihiisa inkastoo ay wali jiraan dhaliilo xoogan oo loo jeedinayo.